Sidee ayuu u shaqeeyaa qalabka dib u qabsiga?
Markaad abuurayso olole ku dhisan dhisme, waxaad u baahan tahay inaad ogaato qiimaha aad isku xiraysid. Haddii aad ogtahay inta uu gadaal ujadaagu u qalmayo, waxaad falanqeyn kartaa haddii ay tahay mudnaanta lacagtaada, waqtigaaga iyo dadaalkaaga. Waxaad qiimeyn kartaa xiriirrada soo galaya ee gacanta ama isticmaalida qalabka dib u qabsiga. Maqaalkani wuxuu udub dhexaad u yahay xisaabinta qiimaha dibadda waxaana rajeyneynaa inuu kaa caawiyo inaad xoojiso ololahaaga dhismaha. Sidaa daraadeed, bal aynu eegno hababka qiimeyntan.
Xidhiidhada xiriiriya iyaga
Waa muhiimadda koowaad ee aad u baahan tahay in aad dareen bixiso markaad abuurayso isku-xidhka boggaaga - rockbet casino review. Ilaha shabakadda ee ku xiran goobta ayaa go'aamiya awooddeeda iyo awoodeeda. Websaytka sare ee internetka waxay ku xirantahay shabakad, si ka sii wanaagsan waxay kuxiran doontaa Google. Si aad u hagaajisid muuqaalkaaga bogga bogga natiijada raadinta Google, waa inaad raadisaa inaad ku hesho xiriirrada kaliya ee ka yimaada noocyada webka ee noocan oo kale ah.
Qalab badan oo saddexaad ayaa gacan ka geysanaya in la cabbiro tayada xiriirrada soo socda. Waxaa laga yaabaa inaad maqashay qaar ka mid ah. Waxaan kugula talin lahaa fulinta qalabka nooca sida Analyzer Websade ama Ahrefs. Qalabkani wuxuu ku siin karaa xogta ugu saxsan ee ku xiran ilaha dhismahaaga. Sidaas darteed haddii aad adigu isticimaalayso adeegsiga DA, DR, TF, CF ama si toos ah u raadi habka buuggan, tani waa midka koowaad ee lagu go'aamiyo xoogga isku xirka (ma aha mid ku haboon).
Cabbiraadda gaadiidka soo galaya
Ujeeddada ugu muhiimsan ee dhisidda xiriirada soo galaya waa in la helo gaadiid la beegsado iyaga oo isticmaalaya. Taasina waa sababta loo cabbirayo taraafikada xidhiidhada soo galaya waa MUST. Haddii ilaha webka ay leeyihiin badan oo ka mid ah gaadiidka soo galaya, waxay u badan tahay in la helo sumcad suurta gal ah oo siiya dadka isticmaala waxyaabo waaweyn. Taas macnaheedu waa in makiinadaha raadinta ay u badan tahay inay u dhigmaan si aad u sareeya, keenista qiimo badan oo badan oo riixa, taraafikada iyo dib-u-noqoshada dambe.
Guud ahaan, ilaha webka ee abuuraya tareeno badan oo tayada leh ayaa loo tixgeliyaa in ka badan kuwa sababaha soo socda awgood:
Traffic ayaa faa'iido u leh liiska Google marka mashiinkaan raadinta uu qiimeynayo hay'ad ilbixineed oo ku habboon oo ku xiran tirada dadka soo booqda ee yimaada bogga ka socda raadinta dabiiciga ah. Taas macnaheedu waa in goobta aad kuhesho xiriirinta laga yaabo in ay kor u qaadaan tayada iyo halkan ka abuuraan xiriiro badan, iskudubkaada xariirkaada xoogaa wakhti ka dambeeya.
Gaadiidka imaanaya goobtaada
Goobo badan oo baabuurta wata ayaa sidoo kale dhalin doona taraafikada boggaaga dambe iyada oo loo marayo backlinks. Waxay si wax ku ool ah u saameyn doontaa beddelaaddaada iyo kor u qaadida awooddaada indhaha Google. Inkastoo intaa ka sii awood badan ay weli tahay dood. Si kastaba ha noqotee, waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaad tagto goobo u keeni karta gaadiidkaaga bogaggaaga.
Mar kasta oo aad dhiseyso xiriir, waxaad u baahan tahay inaad hubiso in aad meel ku dhigato ama isku mid ah shabakadaha webka si aad ula goobta. Intaa waxaa dheer, isku xirnaanta waxay u baahan yihiin in lagu daro waxyaabo munaasib ah si ay dadka u siiyaan faham cad oo ah waxa ay la kulmi doonaan ka dib markaad xiriiriyahaaga soo gudbiso.